Barcelona oo Dirqi uga Badisay Kooxda Celta Vigo “Sawirro” – Radio Muqdisho
Kooxda Celta Vigo ayaa waxaa garoonkeeda Estadio Municipal de Balaídos 0-1 uga badiyay kooxda Barcelona oo hogaamineyso horyaalka Spain ee La Liga.
Kooxda Celta Vigo ayaa ciyaar wanaagsaneyd qeybtii hore ee ciyaarta,iyadoo heshay fursado dhowr ah,lakiin uma suura galin in ay wax gool ah dhaliso.
Ciyaaryahan Jeremy Mathieu ayaa daqiiqadii 73-aad ee ciyaarta goolka guusha oo madax ahaa u dhaliyay kooxda Barcelona.
Garsoorihii ciyaarta Inaki Vicandi ayaa dhamaadkii ciyaarta kaarka casaanka ah u taagay ciyaaryahan Fabian Orellana,ka dib markii uu cows ku dhuftay ciyaaryahan Sergio Busquets oo khadka dhexe uga ciyaara kooxda Barcelona.
Kooxda Barcelona ayaa horyaalka Spain ee La Liga ku hogaamineyso 71-dhibcood,halka kooxda Celta Vigo ay horyaalka uag jirto kaalinta 11-aad,iyadoo leh 35-dhibcood.
Madaxweyne Xasan: “Go'aanada siyaasadeed ee dowladda, ma saameyn doonto Jaaliyadaha Soomaaliyeed”